‘सूत्रमालामाथिको केही सूत्रात्मक अभिव्यक्ति’ | मझेरी डट कम
gorkhesailo — Wed, 09/15/2010 - 12:42
यस्तै साधना छ - ऋषिप्रसाद लामिछानेमा । गजलकार बन्ने धून सवार छ उनमा र उनी साधनारत छन् । उनी एकोहोरिएका छन् - गजल ज्ञानका लागि, गजल प्राप्तिका लागि ।
औपचारिक रुपमा कम शिक्षा लिए तापनि गजलकार बन्ने धूनमा दीक्षा प्राप्त गरेका गोर्खेले क्रमिक रुपमा पत्रिकालाई निरन्तरता दिनु तथा कृतिहरु प्रकाशित गर्नु उनको साधनाको उपलब्धि हो । यस क्रममा उनले आफ्ना कमजोरीलाई सकेसम्म गोर्खेलौरी लगाएर लखेटेका छन् फलस्वरुप गजलपथका यात्री बन्दै गजलबिम्बको सम्मोहनमा मुस्कान छर्दै उनले कादम्बरी रच्दैछन् सूत्रमाला उन्दै छन् ।
उनको सूत्रमाला उनन्तीस बहर छन्दमा सुसज्जित तथा पैँसठ्ठीओटा सूत्रात्मक दानाहरुमा सुसङ्गठित छ । अनि बहरमा गजल लेख्न खोज्नेहरुका लागि यो सुन्दर उपहारको रुपमा प्रस्तुत छ । उनको उन्माद स्वीकार्य छ वरिष्ठ गजलकार बूँद रानालाई । उनको विचारमा -
ह्दयको सुने कुरा सुने साइँलोले
बहुमूल्य सूत्रमाला उने साइँलोले
लाखलाई लाखले नै गुने साइँलोले
उनको साधना प्रिय छ केशवराज आमोदीलाई । उनको भनाइमा यिनले गजलका साधनारत कलिला नवसाधकहरुलाई दृष्टिगत गरी संस्कृत काव्यशास्त्रका पिङ्गल छन्द र गजलमा प्रयुक्त हुने उर्दू फारसी इल्मे अरुज छन्द-शास्त्र बाट शास्त्रीय बहरमा गजल लेखी नेपाली गजलसाहित्यको मन्दिरमा सुगन्धित कोमल-सिर्जना-पुष्प समर्पण गरेका छन् ।
उनका हरेक गजलमा लघु गुरुको सूत्र प्रयुक्त छ । केहीमा छन्दोबद्ध नियमानुसारको यति भङ्ग भएर लयमा विचलन ल्याइएको देखिए ता पनि प्रयास स्तुत्य छ । यो सङ्ग्रह गजलप्रेमीका लागि अमूल्य साधन बन्न सक्छ र यसैको आधारमा गहन साधना गर्न सक्छ ।
उनको यो सङ्ग्रह नियममा बाँधिएको अनुशासित तर केही कमजोर किशोरको रुपमा देखापरेको छ । यस्तो किशोर जसमा परिपक्वता आउन अझ प्रयास गर्नुपर्छ । परिपक्वता हरेक अभिव्यक्तिको धर्म हो र मर्म पनि । यहाँ परिपक्वता शब्द-शिल्पको हो र कलात्मक पक्षको पनि ।
यसैले अब गोर्खेको साधना भावको गहनता तथा शब्दशिल्पतिर उन्मुख हुनुपर्छ । उनले अब कलात्मक पक्षको परिष्कार तथा परिमार्जनतिर पाइला चाल्नुपर्छ । मेरो सुझाव सूत्रमालाका सूत्रधारलाई ।
मेरो धृष्टता यतिमात्र यस सङ्ग्रहका लागि । किनभने स्वयम् वरिष्ठ गजलस्रष्टा बूँद रानाका कलात्मक बूँदहरु यसभित्र महिमान्वित छन् अनि गजलपारखी केशवराज आमोदीका विश्लेषणात्मक दृष्टिहरु यसभित्र गौरवान्वित छन् । समग्रमा सूत्रमाला उदाहरणीय र उल्लेखनीय कृति हो भने कृतिकार दृढसङ्कल्पका धनी हुन् अनि गन्तव्यलाई पाइछाड्ने सफल योद्धा हुन् ।
जङ्गेले बोलेपछि बोल्यो बोल्यो
गोर्खेले मन खोलेपछि खोल्यो खोल्यो
हो गोर्खेको मन यहाँ उदाङ्गो छ गोर्खेको यहाँ पूर्ण चिनारी छ । बधाइ गोर्खेको यस स्तुत्य प्रयासलाई साधुवाद गोर्खेको दृढसङ्कल्पलाई ।
भ‌.न.पा.-२, आँपटारी, नारायणगढ. चितवन ।
पल्लव साहित्य प्रतिष्ठानको आफ्नो मुखपत्र पल्लव साहित्यिक पत्रिका अङ्क - १३ २०६४ कार्तिक– पेज नं १३३–१३४ बाट ।
(स्रष्टा वरिष्ठ समीक्षक साहित्यकार एवम् वालमाउविद्की प्राचार्य हुनुहुन्छ ।)
हृदय देखेनै हार्दिक बधाइ
अतिथि — Wed, 09/15/2010 - 17:06
हृदय देखेनै हार्दिक बधाइ गोर्खे साइँलाज्यूको साधना र यो अतिनै गहनशील प्रशंसक योग्य प्रयासलाई। र,उहाँले प्राप्ती गर्न चाहेको लक्ष्य सफल रहोस् भन्ने कामना सहित धन्यवाद! सरस्वती रिजालजीलाई पनि यति सुन्दर समीक्षाका लागि।
धन्यवाद अतिथि मित्रलाई
gorkhesailo — Thu, 09/16/2010 - 14:52
धन्यवाद अतिथि मित्रलाई ‌‌
धन्यवाद अतिथि मित्रलाई यि सबै यहाँहरुकै प्रेरणालेमात्र भएको हो । म त केवल एउटा साहित्यलाई मन पराउने विद्ध्यार्थीमात्र हुँ । त्यसपछि पनि मैले कुमार सिँखडा जस्ता अन्वनय मित्रलाई पाएको छु । उहाँजस्तो एउटा बलियो साहित्यसेवीलाई पाउनु नै मैले मलाई भाग्यमानी सम्झनु पर्छ भन्ने लागेको छ ।
मित्र अव तपाइँले हाम्रो वेवसाइट www.pallawa.com.np पनि हेरेर कोमेन्टहरु दिनुहुन र प्रयोगपनि गरिदिनु होला भन्ने बिश्वासमा रहने छु ।
kbs — Thu, 09/16/2010 - 21:07
गोर्खेज्यूलाई लगनशीलतालाई मेरो पनि सलाम छ।
salaam mero pani gorkhe saila
tirtha — Fri, 09/17/2010 - 10:35
salaam mero pani gorkhe saila dailaa, saflatale sagarmatha chumosh,pragatiko kamana,
तिर्थ जी अनि भाई कुमारजीलाई
gorkhesailo — Tue, 09/21/2010 - 22:36
तिर्थ जी अनि भाई कुमारजीलाई धन्यवाद एवम् नमस्कार ।
तिर्थ जी अनि भाई कुमारजीलाई धन्यवाद एवम् नमस्कार यसरी सधैँ यहाँहरुको स्नेहताले ममा बास गर्यो भने अवश्यै पनि अगाडि बढ्ने दिनहरुले निम्त्याउने ने छ भन्ने पूर्ण विश्वस्त छुु । यहाँहरुले हाम्रो वेवसाइट www.pallawa.com.np पनि हेरेर कोमेन्टहरु दिनुहुन र प्रयोगपनि गरिदिनु होला भन्ने बिश्वासमा रहने छु ।